🥇 Ukuphendula ngezimali kwimpahla yokusebenza
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 309
Ividiyo ye-accounting kwi-logistics
Myalelo we-accounting kwi-logistics
Alikho ishishini elinokusebenza ngempumelelo ngaphandle kwenkqubo esebenzayo yobalo-mali yazo zonke iinkqubo zolawulo, zomsebenzi owenziweyo, wokuhamba kwempahla kunye neendleko ezenziweyo. Njengawo nawuphi na omnye umbutho, inkampani elungiselelwe ukuba inezinto ezithile zomsebenzi, apho inkqubo ye-USU-Soft iguqula ngaphandle kwengxaki. Ngoncedo lwale software, ukubalwa kwemali kulungiselelwa izinto kuya kujika kube yinkqubo enzima neyintsonkothileyo ibe sisixhobo sohlalutyo olubanzi, ulungiso nophuculo lweenkqubo ezikhoyo zombutho.
Ukulungiselela izinto, ukubalwa kwemali ekufuneka kusekwe utshintsho lwedatha ngexesha lokwenyani, kufuna ukuhlaziywa rhoqo kolwazi kunye nokulandela umkhondo kwinqanaba ngalinye lolawulo. Isicelo se-USU-Soft sinikezela ngokuhlaziywa kwedatha yangoku enkosi kwicandelo lenkqubo yeZalathiso. Le bhloko iqulethe ulwazi oluhlelwe kwiifolda: Imali igcina useto lwezezimali; usebenzisa ifolda yabathengi, unokulandela umkhondo wokubuyiswa kwintengiso kunye nokuqhuba uhlalutyo lokuthengisa; Imibutho iqulathe onke amasebe kunye noluhlu lwabasebenzi benkampani; Kukwakhona ulwazi oluneenkcukacha malunga neenkqubo zeshishini kunye neendawo zomsebenzi, imigangatho yokusetyenziswa kwepetroli, iindleko zeenkonzo zabaphethe iqela lesithathu. Icandelo lezalathiso likuvumela ukuba ufezekise uhlalutyo oluzenzekelayo lwedatha kunye nazo zonke iintlobo zobalo kulungiselelo lophicotho-zincwadi, enegalelo ekuchanekeni kwedatha nasekususeni iimpazamo ezivela kwimisebenzi yobalo yemali. Ukugcinwa kwemali kugcinwa kudlala indima ebalulekileyo kulungiselelo lwezinto, kwaye inkqubo ecetywayo yokulawulwa kwempahla inceda ukuseta imisebenzi yokugcina ngokukhawuleza kunye nokuzaliswa kwangexesha kweendawo zokugcina kunye neendawo zokugcina izithuthi. Ubalo-mali olusekuhleni lukwakhokelwa yinkqubo yamaxwebhu yolawulo kunye nenkqubo yokuvunywa kwayo, apho bonke abantu abanoxanduva baziswa ngokufika kweenowuthsi ezintsha ze babeke iliso ngexesha lomsebenzi. Ke, umbutho weenkqubo zangaphakathi zenkampani ziyaphuculwa.
Inkqubo yobalo lweenkonzo zamalungiselelo ikuvumela ukuba useke umsebenzi osebenzayo kunye nabathengi ngokugcina isiseko sedatha yabathengi, ukwenza izicelo zothutho, ukulandelela ukusebenza, kunye nokulawula ukufunyanwa kwemali. Umsebenzi wabaphathi phantsi kolawulo olusondeleyo lolawulo wenza iinkonzo zothutho zibengcono kakhulu kwaye inika inkampani ithuba lokukhuphisana. Ukwenza i-akhawunti yabathengi kulungiselelo ngoncedo lwenkqubo ye-USU-Soft yolawulo lwamalungiselelo kulula kwaye iyakhawuleza, ngelixa ufumana izixhobo ezininzi zokusebenza kwiziko ledatha leCRM. Icandelo leeNgxelo likuvumela ukuba ukhuphele iingxelo zemali kunye nezolawulo kwiinkonzo ezibonelelweyo, iindleko ezenziweyo, ukubuyisa iindleko, ulawulo lwempahla kunye nenzuzo. Iingxelo zinokuqulatha iigrafu ezibonakalayo kunye nemizobo kwaye inokuveliswa ngalo naliphi na ixesha. Ukuphendula ngezimali kulungiselelo lokubonelela kunika uluhlu olubanzi lwamathuba ohlalutyo olubanzi lweshishini, kubandakanya nomxholo weyunithi nganye yezothutho. Uncedo olukhethekileyo lwesoftware kukukwazi ukubeka esweni inkqubela phambili yolondolozo: isithuthi ngasinye kwizithuthi sinesimo saso kunye nemihla yokulungiswa okucwangcisiweyo, imfuno elumkiswa yinkqubo yolawulo lwamalungiselelo. Yiyo loo nto inkqubo yokunikwa kwengxelo iqinisekisa ulondolozo kwangexesha kunye nokujonga imeko yezithuthi, kunye nokufumaneka kwezixhobo ezifanelekileyo zokwenza ngokufanelekileyo iiodolo.
Inkqubo yobalo mali kulungiselelo lusisixhobo esisebenza ngokukuko ukuphumeza izicwangciso zeshishini kunye nokuphucula iinkqubo kunye nokulawula umgangatho weenkonzo. Isoftware yokugcinwa kwempahla ibeka yonke imisebenzi ngokulandelelana kwayo, kwaye abathengi bakho ngokuqinisekileyo baya konwaba ziinkonzo zakho! Iskimu somsebenzi esibonakalayo sikunika umfanekiso opheleleyo weenkqubo eziqhubayo: indlela eneenkcukacha zothutho ngalunye, ukulungela isithuthi, amanqaku okuhambisa kunye nokothula umthwalo, ababekiweyo, ukubalwa kwendlela kunye nazo zonke iindleko, kunye nokufumaneka kwemali kumthengi. Inkqubo yolawulo lwamalungiselelo iqinisekisa ukuphuhliswa komgaqo-nkqubo wezemali onobuchule ngenxa yohlalutyo lokuhamba kwemali rhoqo kunye nokuvavanywa kokusebenza kwezigqibo zolawulo. Isoftware yomsebenzi omnye kuwo onke amasebe kunye namacandelo ikuvumela ukuba ugcine uxanduva kwaye udibanise idatha yokusebenza kuyo yonke inkampani.
Ngenxa yokuguquguquka kweseto senkqubo, isoftware ilungele naluphi na uhlobo lombutho kwaye ilungelelanisa nezinto ezithile zomsebenzi. Ugcino lwe-USU-Soft yokugcina izinto lunceda ngexesha elifanelekileyo lokugcina uluhlu kunye nokugcina izinto kumthamo owaneleyo. Ufumana uluhlu lweenkcukacha ezibanzi malunga neyunithi nganye yezothutho: iinombolo, iimveliso, abanini, amandla okuphatha; Kuyenzeka ukuba ulayishe amaxwebhu, kubandakanya neepasipoti zobugcisa. Isoftware ikhumbuza ixesha lokutshintsha amaxwebhu ezothutho ukuthobela imigaqo emiselweyo. Ukugcinwa kweenguqulelo zekhompyuter zamaxwebhu ahlukeneyo kunokwenzeka kwinkqubo (iikhontrakthi, iifom zokuodola, ii-invoyisi, amakhadi amafutha), kunye nokothula ngokukhawuleza kwabo. Unokwenza iinkqubo ezicwangcisiweyo zolondolozo kunye nokubeka iliso kuzalisekiso lwazo. Uhlalutyo oluneenkcukacha zokugcina iimpahla kunye novavanyo lombutho womsebenzi wokugcina ngokuqinisekileyo luncedo olukhulu.
Umbala ohlukileyo kunye nenqanaba leeyunithi zothutho zibonisa ngokucacileyo umfanekiso wenani lezithuthi ekulungisweni nasekulungele ukusetyenziswa. Ukudityaniswa kolwazi lwenkqubo yobalo kwiwebhusayithi yenkampani yakho iyafumaneka, ukuba kukho imfuneko. Ulandela umkhondo wenqwelo-mafutha nganye: inani lezinto zokumisa, iindawo kunye nexesha lokupaka, iimayile zemihla ngemihla, kunye nokwazisa abathengi. Uya kuba nakho ukuvelisa ingxelo ngomsebenzi womqeshwa ngamnye kwaye uvavanye intsebenzo yakhe kunye nokukwazi kwakhe ukusebenzisa iiyure zomsebenzi ngokufanelekileyo.